गायक सङ्गीतकार सुजन तिगेला लिम्बु | Websoft IT Nepal Pvt. Ltd.
Published date : 2018-04-20 Your IP - 34.203.245.76
नेपाली गीत सङ्गीतलाई समृद्धतर्फ लैजानका लागि अनेक स्रष्टा लागि परेका छन् । नेपाली आधुनिक गीत–सङ्गीतमा प्रत्तद गायनदेखि आजको डिजिटल युगसम्ममा हजारौं गायक–गायिका एवम् सङ्गीतकारले आफ्नो जीवन व्यतित गरिसकेका छन् । नेपाली गीतसङ्गीतको लामो समयको अन्तराल सँगसँगै निकै मिठा र सश्क्त स्वरका धनी गायक गायिका र सङ्गीतकार यो क्षेत्रले पाएको छ । अहिले पनि यो क्षेत्रमा धेरैले आफ्ना क्रिएशनहरु प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ । यस्तै यो क्षेत्रमा आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाउन सफल गायक तथा सङ्गीतकार हुन् सुजन तिगेला लिम्बु ।
अहिलेसम्म आउँदा ३ सय भन्दा बढी गीतमा स्वर र १ सय जति गीतमा सङ्गीत भरेका उनले थुपै्र गीतकारको शब्दमा स्वर र सङ्गीत भरेका छन् । लोक गायन, पाश्र्व गायन र आधुनिक सबै खालका गीत गाएर स्रोताको मन मष्तिकमा आफ्नो छुट्टै छबी बनाएका सुजन सानै देखिनै यो क्षेत्रमा लागेको बताउँछन् । केही गीतमा आफैँ मोडलिङ समेत गरेका उनका सेल्फिको जमना, तिमी फूल बनिदिनु प्रिय, कथाले मागेपछि, अरे के साह्रो व्युटी, म त परे सोझो, लुङ्गामा ज्यु, मायालाई बैना सालैजो, कौडा जस्ता गीत बढी स्रोता÷दर्शको बढी रोजाइका गीत रहेका छन् । उनका अहिलेसम्म पाँच वटा एल्वम बजारमा आएका छन् भने थुप्रै कलेक्सन एल्वममा पनि स्वर दिएका छन् ।
उनका गीतलाई स्रोता÷दर्शकले मन पराउनुका साथै उनले केही अवार्ड पनि हात पार्न सफल भएका छन् । गौतम बुद्ध जन्मे जहाँ स्वदेश गीतमा उनले कालिका म्युजिक अवार्ड हात पारेका छन् भने थुप्रै अवार्डहरुमा नोमिनेशनमा परेका छन् उनका गीत ।
उनले हालै दर्शक÷स्रोतामाझ ‘मायाले सन्सार थाम्दैन’ गीतको म्युजिक भिडियो ल्याएका छन् । बेलायतमा बसेर गीत तथा कबिता लेख्नमा आफूलाई सक्रिय बनाइरहेकी जानू काम्बाङ लिम्बू को शब्द रहेको यो गीतमा सुजनकै सङ्गीत रहेको छ ।
‘तिमी मान या नमान’ सार्बजनिक
मनोज विक र सविना पन्तको को ‘मेरो पालो कैले ’ हेर्नुहोस भिडियो